2021 MA Plan 4 (HMO) - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'idada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2021 > 2021 MA Qorshaha 4 (HMO)
Qorshahan waxaa ka mid ah kor u qaadista caymiska dawada dhakhtarku qoro oo loogu talagalay $ 94 bishiiba.
Xubnaha u baahan caymiska daawada ee la xoojiyay. Haddii aad si joogto ah u qaadato wax ka badan 2 daawooyinka laguu qoro ama aad leedahay xaalado gaar ah oo ku saabsan daaweynta daroogada ee kharashka badan, qorshahan adiga ayaa laguugu talagalay.
Guji badhanka hoose si aad u barato sida loo qoro qorshahan.
ISKU DAY HALKAN
2021 Faa'iidooyinka Qorshaha markaad eegto
Daboolida Qorshahan waxaa kamid ah:
Caafimaadka, Ilkaha, Aragtida, Dawooyinka loo qoro, Barnaamijka Jimicsiga, iyo inbadan.
Faa'iidada Medicare ee CHPW
Medicare asalka ah
Premium $ 94* Qeybta B Premium
Farmashiyaha 5 Tiers (1/2/3/4/5)
U adeegso farmasiga doorbidka lacag-bixinta ugu yar
Hadafka Ururka $ 0 bixin, xaddid hal imtixaan sanadkiiba. Ilaa $ 150 labadii sanoba mar qalabka aragtida rijeetada. Aan Daboolin
ilkaha $ 0 bixin, xaddid ma leh adeegyada ka hortagga ilkaha. Ilaa $ 500 xadka faa'iidada dheeriga ah sanadkiiba. Aan Daboolin
Baashaal $ 0 bixin (ilaa 4 booqashooyinka joogtada ah ee dheeriga ah sanadkiiba) Aan Daboolin
Daawo Kale $ 0 bixin (ilaa Booqashada 12 sanadkiiba) oo loogu talagalay acupuncture, naturopathy, iyo non-Medicare oo loo yaqaan 'chiropractic' Aan Daboolin
Barnaamijka Jimicsiga Qalabka jirdhiska iyo xubinnimada jimicsiga Aan Daboolin
* Waa inaad sii wadaa inaad bixiso khidmaddaada Medicare Qaybta B.
Buugyaraha oo kooban oo kooban ayaa ku siinaya adiga fikrad ah adeegyada aan bixinno iyo inta aad bixiso. Ma liis gareyso adeeg kasta oo aan daboolno ama liis garaynno xaddidaad kasta ama ka saaris.
Soo-koobidda Macaashka |Resumen de Beneficios
Lagu bixiyo Gobollada soo socda:
Adams, Chelan, Douglas, Grant, Lewis, Okanogan, Skagit, Walla Walla, Whatcom, iyo Yakima.
Adeegyada daboolan & Qiimaha
Caddaynta Caymisku waxay soo bandhigaysaa caymis iyo faahfaahinta lacag bixinta ee adeegyada kala duwan oo ay ku jiraan lacag-bixinta, lacagta caymiska, xaddidaadda, oggolaanshaha hore, iyo jar-jaryada.
Soo Degso Caddaynta Caymiska
Descargue la Evidencia de Cobertura
Ka hubi nidaamka qoran ee u dhigma qorshahaaga bogga Daboolka Caymiska ee caymiska, daabacaadda, iyo xaddidaadaha. Waad soo dejisan kartaa PDF ama waad ku raadin kartaa daawooyinkaaga magaca adoo adeegsanaya joornaalka internetka.
➔ Hubi caymiska daawada laguu qoray
Wax Ma Isbedelay 2021?
Taasi waa su’aal weyn. Wixii isbeddel ah ee ku yimaada qorshaha waxaa lagu faahfaahiyay Ogeysiiska Sannadlaha ee Isbedelka (ANOC).
➔ Soo Degso Ogaysiiska Sannadlaha ee 2021 ee Isbedelka
Descargue el aviso Anual de Cambios de 2021. '
Faa'iidooyinka Gaarka ah
Joogtee gurigaaga ama qolka jirdhiska. Hubso inaad jimicsi sameyso si aad firfircoonaan iyo caafimaad u hesho.
Baadh faa iidadayada jirdhiska
Ka dib isbitaal bukaan jiif ah ama xarun caafimaad oo xirfadlayaal ah joogitaan ka dib, xubnuhu waxay heli karaan 2 cunto maalintii oo loo geeyo albaabkooda muddo 14 maalmood ah.
Waxbadan ka baro Faa'iidooyinka Cunnada
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Ogast 27, 2021